How to Build an Effective Personal Finance Application - Sicko News
Koontarool wax ku ool ah oo socodka lacagta ayaa ah baahiheenna degdegga ah, oo midkeen kastaaba dhibaatada ku xalliya qaabkiisa. Si kastaba ha noqotee, haddii dadka hore ay u baahnaayeen inay abuuraan nidaam xisaabeed isku dhafan si ay ula socdaan dakhliga soo gala iyo kharashyadooda, maanta xaaladdu way ka sahlanayd, barnaamijyadi maalgelinta ee shakhsiyadeedna waxay u yimaadeen badbaadinta.
Horayba waxaa jira tiro barnaamijyo caddaalad ah oo noocan ah, dabcan, laakiin, haddii aad ku dhawaato qaabka saxda ah, waxaad fursad u leedahay inaad ku biirto hoggaamiyeyaasha suuqa. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad abuurto barnaamij maaliyadeed oo noqon doona mid dareen leh, xasilloon, oo lahaanaya astaamo waxtar leh.
In kasta oo, dhibaatadu aad u adag tahay oo ay u qalantaa jawaab ballaadhan oo faahfaahsan. Taasi waa sababta aan ugu go’nay qodobka oo dhan arrimaha ku saabsan dhisidda barnaamijka maaraynta maaliyadda. Waqti ku bixi inaad fiiro gaar ah u yeelato aqrintiisa, haddii aad wax su’aalo ah qabtid, haka labalabeyn inaad weydiso!
Waa maxay barnaamij maaliyadeed shaqsiyeed?
Haa, barnaamijyada maaraynta lacagta waxay ka sameeyeen meelahooda qorraxda, dadku waxay u isticmaalaan meel kasta si ay u xakameeyaan wareegooda lacageed. Xaqiiqdii, waa inaan uga mahadcelino raaxada ay adeegyadan bixiyaan, waayo, waagii hore, howshu ma aheyn mid fudud. Nasiib wanaagse, hadda, markii barnaamijka mobiladu oggolaado xisaabinta kharashaadka socda, hannaanka ayaa umuuqda mid riyooyinka ah. Hagaag, adiga, sida qofka go aansaday inuu dhiso barnaamij maaliyadeed oo shaqsiyeed, xitaa wuxuu u rogi karaa isha faa iidada.
Ugu horrayn, waa inaan ka fikirnaa waxay dadku u baahan yihiin. Maxay ka sugayaan inay ka helaan barnaamijka maaraynta maaliyadda?
Hawlaha barnaamijyada maaraynta barnaamijyada maareynta lacagaha ay qabtaan
Aaladaha keydinta maaliyadeed waxaa loogu talagalay inay qabtaan hawlo aad u gaar ah, aad u fudud, laakiin muhiim ah. Hadafka ugu weyni waa in laga caawiyo isticmaaleha sidii loo maamuli lahaa miisaaniyadiisa.
barnaamijka maalgelinta shaqsiyeed
Isaga oo ka hadlaya samaynta lacag … Uumana jeedno dakhliga adduunka, ee waxaynu ka ahayn maalgashiyo yaryar iyo keydin, si kastaba ha noqotee, sida ay yiraahdaan, Penny badbaadiyey waa been-abuur la kasbaday. Acorns iyo YNAB (dalabyo caan ah oo nooc ah) ayaa qaatay qaab la mid ah kana faa’iideysteen. In kasta oo, wax yar kadib ayaan faahfaahin dheeraad ah ka bixi doonnaa.
Uma baahnid inaad ku xalliso dhammaan howlaha kor ku xusan hal dhicitaan. Kaliya la imow fikrad app maaliyadeed oo shaqsiyeed (isku day inaad hesho qaab aan caadi aheyn), “xir” si fiican ayey u socotaa (waxaan ka hadlaynaa qaybta UI / UX, dabcan), oo ficil samee!
Eebbe agtiisa, waxaan leenahay fikrad naqshadeed oo wanaagsan oo lagu dhiirigelinayo qiyaastaada.
dhiso barnaamij maaliyadeed shaqsiyeed
Noocyada barnaamijyada maaliyadeed
Waxaa jira kala duwanaansho badan oo softiweer maaraynta maaliyadeed, laakiin barnaamijyadan oo dhan waxaa loo qaybiyaa 2 nooc oo aasaasi ah:
codsiyada fudud ee u baahan gelitaanka xogta gacanta;
adeegyo isku-dhafan oo toos u galaya nidaamka gelitaanka (oo leh tiro kale oo faa’iidooyin ah, kuwaas oo aan hoos ku soo xusnay).
Barnaamijyada maaliyadeed ee fudud
Kani waa nooca ugu fudud ee barnaamijyada maaraynta lacagta marka adeegsaduhu galayo dhammaan xogta kharashyada kaligiis, isaga oo si fudud gacanta ugu qabanaya (gacanta). Codsiyadaani waxay u oggolaanayaan inay la socdaan kharashaadka isla markaana ay u kala soocaan, qorsheeyaan iibsiyada waaweyn, iyo wixii la mid ah.
qodobka aadanaha ee kordhinaya halista qaladaadka (waxyaabaha kale, qofka waxaa laga yaabaa inuu caajis ku galo inuu galo macluumaadka);
kharashyada waqtiga la taaban karo.
amniga (maadaama kaararka bangigu uusan ku xirneyn codsiyadan);
mid ka fudud (oo sidaas darteed ka jaban) geeddi-socodka horumarinta maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed.
Talooyin waxtar leh:
Caqabadda gacanta ee gelinta xogta waxay u baahan tahay in dib loo soo celiyo, – waxaad dhahdaa, iyada oo loo marayo naqshad muuqaal ah oo wax ku ool ah oo dareen leh. Si kastaba ha noqotee, waxaan dib ugu soo xusuusan doonaa mowduuca UI / UX ee maqaalkeenna mar labaad. Kaliya sii wad akhriska.
Ka mid ah noocyada caanka ah, waxaa jira kuwa si sahlan ku maray isla markaana horumariyay adeeg la xiriira gelitaanka macluumaadka gacanta, tusaale ahaan, Wally. Markaa haddii aadan haysan ilo kugu filan oo aad ku abuuri karto barnaamijyo maaliyadeed oo nooca labaad ah, micnaheedu maahan inaadan guuleysan doonin – runti waad ku guuleysan doontaa, iyadoo qaab sax ah loo wajaho.
horumarinta barnaamijka maalgelinta shaqsiyeed
Hal fikrad qurux badan
Barnaamijyada maaliyadeed ee isku midka ah
Hadda waxaan ka hadlaynaa nooc ka sii horumarsan oo ah barnaamijka maaliyadda shaqsiga. Xaaladdan oo kale, akoonnada isticmaalaha iyo kaarka bangiga waxay ku xiran yihiin barnaamijka helaya xogta ku saabsan macaamil kasta si otomaatig ah.
nabadgelyadu waxay noqotaa walaac koowaad, marka dhanwalbana, waa lacag aan la macaamilayno!
shaqada si loo dhiso barnaamij maaliyadeed oo shakhsi ahaaneed ee nooca 2aad waa mid adag oo qaali ah (marka la barbar dhigo kiiskii hore).
fududeynta isticmaalka, dalabka noocan ah kuma qasbo isticmaaleha inuu qabto ficillo aan loo baahnayn;
hufnaan sare, sida ku tiirsanaanta oo keliya xusuusta iyo mas’uuliyadda isticmaale ma ahan habka ugu macquulsan.
Sidii aan u sheegnay, waa inaad si adag uga shaqeysa arrimaha amniga. Waxaan ku siin doonnaa dhowr talo oo ku saabsan arrintaan goor dambe marka aad sharaxeyso faahfaahinta abuurista barnaamijka maaliyadeed ee ugu wanaagsan ee shaqsiyadeed.
Eebbe, haddaan ka hadlayno sida ugu wanaagsan, waa inaan sidoo kale ka wada hadalnaa kuwa aad xafiiltamaan.
Barnaamijyada maaliyadeed ee ugu fiican: tusaalayaasha iyo falanqaynta
Xoriyadda xulashada barnaamijyada maaliyadeed waa wax la fahmi karo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira barnaamijyo badan oo noocyo ah oo ka jira suuqan, taas oo macnaheedu yahay inaad ku dadaasho inaad ka soo baxdo tartankaaga
Welwelkaaga koowaad ee arrintani waa in la falanqeeyo barnaamijyada qorshaynta maaliyadeed ee ugu fiican oo la arko sida ay u soo jiitaan isticmaaleyaasha.
Mint waa adeeg caan ah oo diirada saaraya xakameynta kharashaadka shaqsiyadeed, inka badan 14 milyan oo adeegsadeyaal ah. Kaaliyaha maaliyadani wuxuu suuqa joogay ilaa 2008, sidaa darteed adeegsiga waqtigiisa ayaa la tijaabiyay. Mint waxay bixisaa muuqaalo badan oo xiiso badan oo codsiyada kale aysan laheyn.
u samee barnaamij loogu tala galay maaliyad shaqsiyadeed
Adeeggu wuxuu u baahan yahay oo keliya barnaamijka Mint si uu u maareeyo dhammaan arrimahiisa dhaqaale, oo ay ku jiraan akoonnada bangiga, kaararka lacag-bixinta, iyo amaahda guryaha.
Ka sokow caawimada muuqata ee maareynta lacagaha, barnaamijka maaliyadeed ee shaqsiga wuxuu bixiyaa talooyinkeeda ku saabsan qoondeynta habboon ee miisaaniyadda. Barnaamijku wuxuu falanqeynayaa dhammaan kharashyada adeegsadaha wuxuuna u siiyaa hab fudud oo lagu yareeyo kharashyada.
Shirkadda waxay cadeyneysaa inay ka faa’iideysaneyso “nidaamka heerka amniga ee bangiga” waxayna awood u leedahay inay u ogeysiiso macmiilka haddii ay jiraan waxyaabo laga shakiyo oo aan caadi ahayn.
Barnaamijyada maaliyadeed ee mint waxay la shaqeeyaan nidaamyada hawlgalka kala duwan waxayna taageeraan dhammaanba habab caan ah.
Barnaamijku waa bilaash oo wuxuu adeegsadaa qaabab aan toos ahayn oo lacag-uruurinta, sida xayeesiinta gudaha ah.
barnaamijyada maaraynta lacagta
Wally waa tusaale weyn oo loogu talagalay barnaamijyada maaliyadeed ee fudud ee u baahan gelitaanka xogta gacanta (waan soo sheegnay, xusuusnow?). Waa barnaamij xasaasi ah, kuna caan ah 52 dal isla markaana leh noocyo badan iyo qeyb hoosaadyo loo dejin karo laguna beddeli karo dhadhanka isticmaalaha.
Falanqeeyaal aad loo isticmaali karo oo aad uxiiso-badan.
Kantaroolka Qiimaha marka la eego dhacdooyinka la xiriira.
Geolocation. Wally ayaa si otomaatig ah u tilmaamaysa oo u kala saaraysa meesha uu isticmaaley hadda ku sugan yahay, oo waa inuu cayimaa uun lacagta ku baxday.
Tikniyoolajiyadda Sirdoonka. Wally waxay xasuusisaa doorbidaha isticmaaleyaasha iyo caadooyinka iyadoo la adeegsanayo teknolojiyada barashada mashiinka.
Ogeysiisyada casriga ah – xusuusinta dhacdooyinka (dheh, bixinta waajibaadka ah) ee laxiriirta dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee adeegsadaha.
Ku habboonaan la’aanta ugu badan: dalabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku gasho kharashaadkaaga adoo adeegsanaya furayaasha ama jeegagga sawirka.
Falanqaynta kartida: waad ku mahadsan tahay barnaamijkan maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed, waxaad falanqeeyneysaa oo kaliya halka aad lacag ku soo qaadatay, laakiin sidoo kale sababta iyo cidda aad ku sameysay.
Awoodda la qabsiga dabeecadda aadanaha, la socoshada qaababka macaamilka waqtiga dhabta ah, iyo bixinta macluumaad kujira is-dhexgalka saaxiibtinimo.
Adeeggu sidoo kale wuxuu ka tirsan yahay tirada barnaamijyada keydinta lacageed ee lacag la’aanta ah laakiin wuxuu bixiyaa astaamo gaar ah oo loo bixiyay (sida Beddelka Lacagta, Ogeysiinta Ku-celinta, Shaandheynta Sare, iwm).
dhismaha barnaamijka maaraynta maaliyadda
Acorns waa ikhtiyaar aad u fiican oo ah maareynta maareynta maaliyadda haddii qofku doonayo inuu ka faa’iideysto fursadiisa maalgashiga maalgashiga, iyo wixii la mid ah, laakiin kuma dhicin inuu sameeyo. Maanta adeegga taleefanka gacanta laga hadlayo ayaa leh in ka badan 850 kun oo koonto diiwaangashan, in kabadan 75% waxay ka tirsan yihiin kunka sano.
Maalgelin fudud oo lagu xusho qaab ku habboon: Maalgashiga hal mar ah (haddii adeegsaduhu haysto lacag lacag la’aan ah) ama qoraal xilli-go’an xaddi cayiman;
“Lacag la helay” – muuqaalku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad lacag ku kasbato sameynta wax iibsashada. Shirkadaha ay Acorns iskaashato (isla Blue Apron, HotelTonight, iyo kuwa kale) waxay ku abaal mariyaan isticmaaleyaasha iibsiyada la sameeyay (wax ku saabsan $ 10 ama wax la mid ah).
Adeegsiga isbeddelka sida maal-gashiga micro-micro. Waxay ku saabsan tahay isbeddelka wareega ee iibsi kasta. Dabcan, si taasi u dhacdo, barnaamijka waa in lagu xiraa kaararka bangiga isticmaale.
abuur barnaamij app
Waa fursad aad u fiican oo lagu barto sirta ku saabsan maalgashiga lagu guuleysto lagana fogaado khatarta lacageed inta aad sidaas sameyneyso.
Qaab shaqsiyeed. Codsiga ‘Acorns’ wuxuu weydiiyaa isticmaalaha dhowr su’aalood inta lagu jiro diiwaangelinta wuxuuna sameystaa faylal kaydiyaal shaqsiyeed ku saleysan jawaabaha.
Amniga sare. Uma abuuri kartid barnaamij maaliyadeed shaqsi adigoon ka fikirin ilaalinteeda. Marka loo eego milkiilayaasha Acorn, waxay xallin jireen dhibaatada amniga heerka ugu sarreeya.
Keydinta. Thanks to istaraatiijiyadaha lagu sharaxay, adeegsadayaasha barnaamijyada maaliyadeed ee Acorns waxay si wanaagsan u badbaadin karaan howlaha howlahooda caadiga ah ee nolosha.
barnaamijyada maaraynta barnaamijyada maaraynta lacagta
Codsiga waxaa lagu soo dejisan karaa iyada oo aan la bixin lacag laakiin ka dib marka adeegsaduhu bilaabo inuu maalgeliyo, $ 1 ayaa laga goosan doonaa bil kasta (bixinta $ 2 ama $ 3 doollar ayaa waliba macquul ah, taas oo kuxiran nooca rukunka).
barnaamijyada qorsheynta maaliyadeed ee ugu fiican
YNAB waxay u taagan tahay Waxaad u Baahan Tahay Miisaaniyadda waxayna fududaynaysaa qorshaynta miisaaniyada, taasoo ka dhigaysa mid jajaban oo la maamuli karo.
Waxay macnaheedu tahay YNAB maahan mid ka mid ah barnaamijyada maaraynta lacagaha ee barnaamijyada caadiga ah. Hadafka ugu muhiimsan ee YNAB waa in lala shaqeeyo miisaaniyadda.
app ugu wanaagsan ee maaliyadeed shaqsiyeed
Fasiraadda xeerarka ayaa ah wax iska fudud:
Iyadoo la raacayo qaanuunka 1-aad, adeegsadaha billaha ah wuxuu u qaybiyaa lacagta la heli karo oo dhan qaybaha:
Bixinta (Mawduuc aad u xiiso badan oo ku saabsan dhaqanka Mareykanka).
Biilasha Bishii – waa shey aad u cad oo aan laga bixi karin.
Kharashaadka Maalin kasta – iibsiyada maalinlaha ah, cunno isku mid ah, iwm.
Maalmo roobaadka – waxbadan ayaan ka sheegi doonnaa intaas wixii ka dambeeya
Badbaadinta Yoolalka – dheh, fasax
ama gaari cusub.
Sida ku xusan qaanuunka 2-aad, adeegsadaha billaha ah wuxuu lacag u qoraa lacag la saadaalin karo (sida hagaajinta gaari ama aqal) iyo kharashyada aan la saadaalin karin (ganaaxyada ama dhibaatooyinka caafimaad).
“Ku laabo feeraha” waa dhab ahaan, waa mabda’a feerka, marka loo eego taas oo feeryahanku u dhaqaajiyo isla jihada feeraha mucaaradka. Markii loo adeegsado barnaamijyada keydinta maaliyadeed, waxay la micno tahay in haddii ay dhacdo kharashaad badan, adeegsaduhu ma cadaynayo, laakiin wuxuu hagaajiyaa miisaaniyadda.
Mid ka mid ah howlaha muhiimka ah ee nidaamka ayaa ah in naas-nuujinta aad ku nooshahay jeeg mushahar Jeegaaga. Sharcigan maahan mid qasab ah, laakiin, sida caadiga ah, waa inaad heysataa kayd ku filan oo aad ku bilowdo ku noolaashaha lacagta bishii la soo dhaafay, adigoon taabanin dakhligaaga haatan jira.
Intaa waxaa dheer, barnaamijyada maaraynta lacagta ee YNAB waxay leeyihiin astaamo kale oo badan, oo la fahmi karo:
fursadda lagula xisaabtamo kharashaadka;
diyaarinta warbixinnada ku saabsan xawaaladaha;
wadashaqaynta iyo xakamaynta xisaabaadka;
la socodka kharashyada bil kasta.
Suurtagalnimada inaad wax ku barato sida si hufan loogu maareeyo miisaaniyaddaada. Waxaa intaa dheer, adeegsadayaasha waxaa la siiyaa websaydh u sheegaya sida looga takhaluso deymaha hore.
Fursadda lacag lagu keydiyo oo meel loo dhigo “maalin roob”. Runtii tani waa mid ku habboon oo waxtar yeelan karta!
Habka asalka ah. Ma dafiri karno in YNAB ay u soo dhawaatey arrinta dhismaha barnaamijka maaraynta maaliyadda qaab aan caadi aheyn.
Bisha koowaad, barnaamijku waa bilaash (xitaa in kabadan hal bil – qiyaastii 34 maalmood!), Markaa adeegsadayaashu waa inay iska bixiyaan ($ 50 sanadkii).
Booqo bartayada oo fiiriso mashruuca Wirex – jeebka guusha ee loo yaqaan ‘cryptocurrency wallet’ kaasoo ka caawiyay milkiileheeda inuu kasbado wax badan.
Astaamaha barnaamijyada maaliyadeed
Hagaag, hada waad heshay fikrada waxa tartamayaashaaga caan ku yihiin, waa waqtigii aad ka fikiri lahayd qaabka aad uga yaabiso isticmaaleyaashaada mustaqbalka. Waa inaad dhisto barnaamij maaliyadeed oo shaqsiyeed, adiga oo garanaya waxqabadka ay yeelan doonto.
Waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso abuurista astaamaha sida:
Ogolaanshaha isticmaalaha iyo abuurista koontada;
Bog shaqsiyeed oo leh dhammaan macluumaadka ku saabsan adeegsadaha.
Iskuxirka kaararka bangiga iyo akoonnada isticmaale (haddii aad go’aansato inaad abuurto nooc labaad oo barnaamijyada maaliyadeed ee moobiilka ah)
Awoodda si ay ula socdaan macaamil ganacsi oo dhan oo ay u kaydiyaan taariikhdooda;
Dejinta miisaaniyad maalin iyo bil ah. Muuqaal waxtar leh oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay keydiyaan lacag oo ay qorsheeyaan wax soo iibsasho ballaaran.
Tirakoobyada maaliyadeed ee xad-dhaafka ah iyo warbixinno faahfaahsan oo taxliil ah muddo cayiman. Iyada oo la adeegsanayo barnaamijyo maaliyadeed, adeegsadayaashu waxay isbarbar dhigi karaan qaddarka ku kaydsan dukaamada kaladuwan (ama xubno qoys oo kaladuwan).
Qoondaynta kharashyada: “cuntada”, “dharka”, “cadar”, iwm.
Xusuusin ku saabsan bixinta waajibaadka, ganaaxyada, canshuuraha.
Raadinta isdhaxgalka ah iyo macluumaadka la xiriira.
Beddelka lacagaha qadka.
Suurtagalnimada in lacag-bixinno laga sameeyo tusaalooyinka.
Jadwalka lacag bixinta ee joogtada ah.
Hagaag, waxaad tilmaamtay sida saxda ah ee loo abuuro barnaamij maaliyadeed … laakiin sidee ayaad uga dhigaysaa mid wax ku ool ah oo guul ah intii suurtogal ah?
7 talo si loo abuuro barnaamij dhaqaale oo awood leh
Guusha maareynta maareynta maareynta shaqsiyadeed ee guuleysata waa inay lahaato shaqeyn dheeri ah, horeyna si fiican ayaan uga wada hadalnay arrinta. Si kastaba ha noqotee, tan kuma filna in la soo jiito inta ugu badan ee isticmaaleyaasha oo lagu xiiseeyo barnaamijkaaga. Waxaa jira 7 qodob oo dheeri ah oo laga fikiro ka hor intaadan bilaabin horumarinta barnaamijka maaliyadeed ee shaqsiga.
# 1. Amniga waa waajib
Waa muhiim ma aha oo kaliya in la dhiso barnaamij maaliyadeed oo shaqsiyeed laakiin sidoo kale in la hubiyo amaankeeda. Dadku waa inay kugu aaminaan oo ay ogaadaan in macluumaadka lacagtooda la ilaaliyo.
aaladaha mobilada ee bangiyada mobilada iyo maareynta dhaqaalaha
Waa maxay “barnaamijyo dhaqaale oo aamin ah”?
Xaqiijinta laba-arrimood. Aqoonsiga isticmaale waxaa lagu xaqiijinayaa laba kanaal oo madax banaan:
username (galo) & lambarka sirta ah ama qiimo sir ah oo sir ah (qodobka ilaalinta 1);
Lambarka sirta ah ama lambarka sirta ah ee hal mar la adeegsado (qodobka ilaalinta 2aad).
Diijinta macluumaadka gudbinta iyo keydinta heerka kanaalka xogta. Kuwani waxay noqon karaan borotokoolka SSL caadiga ah.
Qaabka kulanka. Sidookale, way kugu caqli fiicnaan laheyd inaad siiso casharro gaagaaban (oo micnaheedu yahay cimrigiisu xadidan yahay) si aad uga hortagto xaaladaha marka barnaamijyadu socodsiinayaan difaac (dabcan, waxaan ka hadlaynaa barnaamijyada macmiilka-server).
Talooyin dheeri ah:
Waa inaad si taxaddar leh u soo bandhigtaa macluumaadka adeegsadaha gaarka ah ee qofkaasi uusan ku farxi doonin inuu arko xatooyo. Taas macnaheedu waa in la qabsado farriimaha waaweyn waxay noqon karaan kuwo qurux badan, laakiin aan loo baahnayn markay noqoto barnaamijyada kaydinta dhaqaale.
Ha aaminin maktabadaha il-furan ee gabi ahaanba. Ka-reebitaanku waa maktabado waqti-dheer la tijaabiyay oo leh sumcad sifiican loo qaddariyo (sida keydka macluumaadka).
Sidoo kale waa wax aan loo baahnayn in la isticmaalo maktabadaha khariidad-ilo ee isha ku xiran maxaa yeelay xalalka noocan ahi uma oggolaanayaan inay hubiyaan isku halayntooda iyo hufnaantooda.
Dabcan, tani waa qayb ka mid ah talooyinka la xiriira ilaalinta mobilada iyo webka. Intaa waxaa dheer, tikniyoolajiyada ayaa si joogto ah loosoosaarayaa, horumariyayaashu waxay samaynayaan habab badan oo casri ah oo lagu horumarinayo amniga barnaamijyada maaraynta barnaamijyada lacagta.
# 2. U fikir sida isticmaaleyaashaada
maamulka maaraynta maaliyadeed
Waxay umuuqataa wax iska cad: waad arki doontaa
inay wax ka qabtaan dadka wajahaya dhibaatooyinka maaraynta maaliyadeed. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira nuances. Haddii aad xasuusato, waxaan soo sheegnay in bartilmaameedka bartilmaameedka adeegga Acorns uu yahay millennials: adeegsadayaasha jira 18 sano iyo ilaa 34 sano. Taasi waa, astaanta ayaa diiradda saareysa iyaga oo ku hadlaysa afkooda.
Falanqee adeegsadahaaga suurtagalka ah, iskuday inaad bilowdo ka fikirka sidii isaga oo kale, ka dibna aad u abuurtid app maaliyad shaqsiyeed sida waafaqsan baahiyihiisa.
# 3. Fudayd
Dadku ma jecla barnaamijyada murugsan ee aan loo baahnayn, gaar ahaan haddii ay ku saabsan tahay lacagtooda (wixii intaas ka dambeeya, khalad kasta oo halkan ku dhaca waxaa ka dhashay cawaaqib xumo). Sidaa daraadeed barnaamijyada maaliyadeed ee fudud ayaa fure u ah jecelka iyo jeclaanta isticmaaleha.
Qaanuunka dahabiga ahi wuxuu leeyahay 3 riix (ama qasabno) waa inay ahaadaan ku filan inay ku hogaamiyaan isticmaaleha waxa la doonayo (dheh, wuxuu jeclaan lahaa inuu arko tirakoob ama wax kale, dhib maleh). Maskaxda ku hay marka aad dhiseyso maareynta maareynta maaliyadda.
Iyo hal qodob oo muhiim ah. Qaar ka mid ah barnaamijyada maaraynta lacagta waxay bixiyaan suurtagalnimada lacag bixinta, iyo habraaca noocan oo kale ah waa ka dhib badan yahay sida muuqata marka ugu horeysa. Waa inaad si sax ah u hubisaa xogta oo dhan adigoon daalin isticmaalaha ama jahwareerin.
Waxaad haysataa 2 dariiqo oo aad ku xalliso dhibaatada:
hal shaashad oo ay kujirto dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee looga baahan yahay xaqiijinta isticmaalaha iyo qabashada macaamil ganacsi. Si kastaba ha noqotee, bogga noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa mid aad u adag.
dhowr shaashado oo si isdaba joog ah ugu hoggaamiyo isticmaaleha himilada la jecel yahay, tallaabo talaabo talaabo ah. Ku dadaal sidaad u heli lahayd meel dhexe oo aad sameyso tirada ugu yar ee shaashadda la oggol yahay.
# 4. Naqshadeynta UX-da leh
Qaanuunka 4-aad wuxuu si macquul ah ula socdaa kii ka horeeyey, maaddaama fududeynta dalalku ay muujinayso, iyo waxyaabo kale, naqshad soo jiidasho leh oo nadiif ah. Isticmaalayaashu waxay ka fogaadaan barnaamijyada leh muuqaal qarsoodi ah oo la buuxiyay oo ay ku jiraan faahfaahin. Waxaad u baahan tahay inaad weydiisato talo khabiir UI / UX oo khibrad leh oo kuu sheegi doona sida loo abuuro barnaamij dhaqaale oo awood u leh inuu ku soo jiito macaamiisha naqshaddiisa.
Xusuusnowna, isbeddelada UI / UX way isbedelayaan, qaabeynta appna waa inay la beddelaan si ay ula socdaan waqtiyada.
xorriyadda doorashada barnaamijyada maaliyadeed
Fiiri fikrad kale oo ah barnaamij maaliyadeed oo shaqsiyeed, waxaan rajeyneynaa, inay kugu dhiirigelin doonto!
# 5. 24 \_ 7 taageerada macaamiisha
Si dhaqso ah ama waqti dheer, mid ka mid ah isticmaaleyaashaada ayaa laga yaabaa inuu la kulmo dhibaato gaar ah, wuuna kula soo xiriiri doonaa su’aal la xiriirta howlgalka barnaamijyada maaraynta maaliyaddaada. Hawshaadu waa inaad sida ugu dhakhsaha badan ugaga jawaabtid.
Oo diyaar u noqo inaad la xiriirto saacadda oo dhan, adoo siinaya 24 \_ 7 taageerada macaamiisha.
# 6. Dhaqdhaqaaqa
Maanta, waxaa jira aalado badan oo loogu talagalay bangiyada mobilada iyo maareynta dhaqaalaha, waana inaad ku qanacdaa adeegsadayaasha dhammaantood. Waxay la micno tahay inaad ubaahantahay inaad abuurto barnaamij dhaqaale oo xoog badan oo la shaqeeya labada aaladaha macruufka iyo Android (iyo hadii ay sidoo kale taageerto aaladaha Windows, way qurux badnaan doontaa!). Tixraac daruurigan xisaabta hanaanka horumarka.
# 7. Ku bilow yar
Haddii aadan haysan miisaaniyad ku filan oo ah barnaamij barnaamij miisaaniyadeed, ku bilow wax yar – samee qaab MVP ah.
Mid ka mid ah qodobbadayada, waxaan si faahfaahsan uga wada hadalnay sida ay ku bilaabmiddu u yarayn karto qarashka ku baxa MVP, talooyinkeenna ayaa kuu tilmaami doona qaab wax ku ool ah oo lagu keydiyo horumarinta barnaamijka maaliyadeed ee shakhsiga.
Haddii hada aad ku qanacsan tahay faa’iidooyinka dhisida maareynta maareynta maaliyadda, waxaan ku faraxsanahay inaan adeegyadeena siinno. Kooxda Agilie waxay leedahay khibradda saxda ah ee ay caddeeyeen faylalkayaga. Fiiri si aad u hubiso in khubaradeenna ay yihiin kuwa aqoon sare leh.
Sikastaba, waxaan halkaan u joognaa inaan kaalmayno kiis haddii aad rabto inaad u abuurto app barnaamij maaliyadeed shaqsiyeed oo aad rabto inaad hesho natiijada ugu wanaagsan ee suurogal ah.
How Build an Effective Personal Finance Application how to How to Build How to Build an Effectiv How to Build an Effective Personal How to Build an Effective Personal Finance How to Build an Effective Personal Finance Application